Xaamid Mir: Sheekadii saxafi Pakistan u dhashay oo saddex jeer waraystay Usaama Bin Laadin | Biyoguurenews.com
Home Wararka Xaamid Mir: Sheekadii saxafi Pakistan u dhashay oo saddex jeer waraystay Usaama...
Xaamid Mir: Sheekadii saxafi Pakistan u dhashay oo saddex jeer waraystay Usaama Bin Laadin
Hamid Mir iyo Osama bin Laden,
Toddoba asbuuc ka dib weeraradii September 11, 2001, Xaamid Mir wuxuu hor istaagay nin lagu eedeeyey inuu maleegay weerarkaasi isagoo ku sugan meelo aan la garanayn oo ka mid ah Kaabuul. Wuxuu ahaa waraysigii ugu dambeeyay ee uu la yeesho Usaama Bin Laadin.
Wuxuu weerarka dhacay iyadoo ay jireen weerarro kale oo ka dhan ah Mareykanka. Laakiin kani ma ahayn kulankii ugu horreeyay ee dhexmara saxafiga caanka ah ee reer Pakistan iyo hoggaamiyaha al -Qaacida.
Markii ugu horraysay ee Mir la kulmo Bin Laden, wax badan kama aqoonin isaga. Kulanka labaad ka dib wuxuu ogaaday inuu yahay “nin aad halis u ah.” Waqtigii uu wareystay markii saddexaad ayay dunidu si buuxda isu beddeshay.
Xaamid Mir ayaa nooga sheekeeyay wixii daaha gadaashiisa ka dhacay intii wareysiga lagu guda jiray.
Sideed ula xiriirtay Usaama Bin Laadin?
Waa sheeko dheer. Sannadkii 1997 -dii ayaan qoray warqad ku saabsan sida Maraykanku u taageeray Taalibaan iyo inay dawladda Pakistan ku cadaadinayso inay taageerto, waxayna doonayeen inay u adeegsadaan inay ilaaliyaan shirkadda shidaalka ee Maraykanka, ee Unocal.
Markii maqaalkaygii la daabacay, Ra’iisul -wasaarihii Pakistan ee xilligaas, Benazir Bhutto, ayaa i soo wacday si aan isugu dayo inaan u sharraxo mowqifkiisa, isagoo sheegay inuusan taageersanayn fikirka Taliban balse uu u caawiyey oo keliya sababo la xiriira istaraatijiyadda.
Waxa kale oo uu intaa ku daray in dawladiisu aanay saaxiib la ahayn Afgaanistaan ​​taasina ay tahay sababta ay u ilaalinayso dhuunta shidaalka ee Turkmenistan-Pakistan.
Wuxuu ila xiriiriyay wasiirkiisa arrimaha gudaha, General Naseerullah Khan Babar, oo ku celiyay isla hadalkii Ra’iisul Wasaaraha.
Wuxuu ii soo bandhigay inuu iga caawiyo inaan kula kulmo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Taalibaan ee Kandahar aakhirkiina waan la kulmay
Aad bay uga cadhoodeen hadalkayga.
Waxay ii sheegeen in Raadiyaha Iiraan uu soo xiganayo Xamiid Mir, oo qoray bayaan uu ku sheegayo in Taalibaan ay u shaqeyneyso Mareykanka.
Kadib waxay i weydiiyeen: “Ma ogtahay inaan ilaalinayno cadowga ugu weyn ee Mareykanka?
Waxaan ku iri ma aqaan qofka uu yahay. “Osama bin Laden,” ayay igu jawaabeen.
Waqtigaas ma aanan aqoon isaga.
Weligaa horay ma maqashay isaga?
Maya, waxba kama aanan aqoon isaga. Waana markii ugu horraysay ee aan magaciisa qoro.
Waxay ii sheegeen inay diyaarin karaan kulan aniga iyo Usaama dhexmari doona, iyagoo ku xiray shuruud ah inaanan mardambe qorin inay u shaqeynayaan Mareykanka. Waxaan ku idhi, “Hagaag, dhib malahan”.
Miyay adkayd in la helo?
Ma ahayn wax adag in la helo isaga sababtoo ah wax carqalado ah ma soo marin jidka.
Waxaan u jihaysannay Jalalabad, oo ku taal bariga Afgaanistaan, halkaas oo aan uga sii gudubnay Buuraleyda caanka ah ee Tora Bora ilaa godadka, waxaana jiray hoggaamiye Taalibaan oo caan ah, oo la yirahdo Maulvi Younis Khalis, oo i soo dhoweeyay.
Intaa ka dib waxaan soo marnay hannaan amni oo adag, baaritaan jirka ah. Ilaaladu waxay i baarayeen ilaa salka aan ka gaaro saldhigyadooda hoose aad baan uga naxay.
Intaas ka dib waxaan la kulmay Usaama Bin Laadin, oo raaligelin ka bixiyay baaritaankii cabsida badnaa ee soo maray isagoo matalaya dhammaan ilaaladisa.
“Aad baan uga xumahay,” ayuu yiri, “laakiin taasi waa habka amniga. Waxay sidaan ku sameeyaan qof walba wax aadigaa gaar kugu ah ma ahan, xitaa xubnaha qoyskayga.”
Markaa kulankeenii ugu horreeyey wuxuu ku bilaabmay erayga “waan ka xumahay”.
Sidee buu ahaa Bin Laden markaas? Muuqaalkiisa guud?
Run ahaantii, ma ahayn qof caan ah oo aan wax badan ka garanayo.
Maxaad kala hadashay?
Markii ugu horreysay abid, 1997, wareysigeygii ugu horreeyay, waxaan ka hadlay isbahaysiga Taalibaanee Iran iyo Shiinaha.
Taalibaan waligeed xiriir wanaagsan lama yeelan Iiraan, marka waxaan la yaabanahay sababta ninkan uu ugu soo jeedinayo xulafada Talibanka Shiinaha iyo Iiraan.
Arrinta labaad ee uu sheegay ayaa ah in Mareykanku uusan sii ahaan doonin quwadaha adduunka. Tani waxay ahayd 1997.
Wuxuu eedeymaha u jeediyay ka hor weerarkii 9/11.
Waraysigii labaad xaggee ka dhacay?
Wuxuu ka dhacday Kandahar 1998, markii uu soo saaray amar (fatwo) oo ku saabsan dilka dadka Maraykanka ah.
Wareysiga ayaa iftiimiyay fikirkiisa. Waxay ahayd sheeko dheer, malaha qiyaastii afar ama shan saacadood ah.
Waan wajahay. Waxaan su’aal ka keenay in fikirkiisu ka hor yimid mabaadi’da asaasiga ah ee Islaamka maxaa yeelay, sida ku cad barashada Islaamka, dhiigga qof aan Muslim ahayn oo aan waxba galabsan wuxuu la mid yahay dhiigga qofka muslimka ah.
Waxaan u sheegay in haddii aad doonayso inaad disho dadka aan muslimka ahayn ee aan waxba galabsan, taasi ma aha Islaamnimo.
Wuxuu isku dayayay in uu qiil uga dhigo fikirkiisa dilkii dadka Mareykanka.
Wuxuu sheegay in muwaadiniinta caadiga ah ee Mareykanka ay canshuur siiyaan dowladdooda, ay u codeeyaan dowladdooda, ay doortaan dowladdooda. Markaa waxay dejiyaan siyaasado ka dhan ah Muslimiinta.
Taasi waa sababta uu ugu qiil yeelay dilka dhammaan dadka Mareykanka ah. Waxay ahayd dood aad u daciif ah.
Ma ogtahay waxa uu ka hadlay?
Wareysi lala yeeshay bishii May 1998 , maalmo kadib waxaa dhacay weeraradii ka dhacay safaaradihii Kenya iyo Tanzanaia.
Al Qaacida weligeed ma aysan sheegin weeraradan balse waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen.
Kadib wareysigiisii labaad waxaan ku ogaaday in uu yahay nin halis ah oo argagixiso caan ah isla markaana si weyn loo doon doonayo.
Kadib weerarkii 11 September 2001
Wareysiga u dambeeya wuxuu dhacay kadib weerarkaas, maalin ayaa ku hoyday magaalada Jalalabaad, dadka xitaa ma aysan ogeyn halka uu ku sugnaa.
Waxaan ku sugayay magaalada Kabul, ma ogeyn halka uu ku sugnaa sababta oo ah markii la ii geynayay , indhaha ayaa la ii xiray, waana wax aanan igu dhicin markii aan la yeelanayay wareysigii koowaad iyo labaad.
Wareysigii ugu dambeeyay ee aan la yeeshay amnigiisa ayaa si weyn loo adkeeyay , xitaa la iima ogoleyn in aan isticmaalo kameero, waxay ii sheegeen in ay heystaan kameero isla markaana ay sawirro ka qaadayaan si ay ugu wareejiyaan wax ay ka duubaan.
Aniga la iima ogoleyn in aan duubo wareysiga.
Waxay iga qaateen qalabkii aan watay iyagoo adeegsanayo qalabkooda muuqaalka iyo cod duubista, markii ay dhameeyeen duubista waxay igu wareejiyeen cajalad.
Waxaan weydiyay , maxay tahay sababta aad sidaas u sameyneysaan?
Ayman Al Zawahari oo ku sugnaa goobta ayaa igu qoslay wuxuu igu yiri, “Waxaan la dagaalameynaa dalal awood leh markaa ma jirto cid aan aamineyno”
Waxaan ku iri, “Waan fahmay, ma waxaad ka cabsi qabtaan in aan idiin ku dilo qalabkan aan sita ee aan wax ku duubaya”
“Wey igu qosleen, waxaa soo afjarmay kulankeena”
Previous articleFBI-da oo baahisay xog cusub: Sacuudiga ma ku lug lahaayeen weeraradii 9/11?
Next articleNin Soomaaliya oo Dalka Talyaaniga ku tooriyeeyay 4 Qof+Sababta